पल शाह प्रकरणमा कुन सेलिब्रेटीले के भने ?
काठमाडौं । नाबालिका जबरजस्ती करणी आरोपमा पक्राउ परेका ‘पल’ भनिने पूर्णविक्रम शाहको बयान सुरु भएको छ । एक नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा उनी तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छन् । प्रहरीले अदालतबाट यसअघि नै ७ दिनको म्याद थपेको छ ।
आज भने अदालतले उनीसँग बयान लिएको छ । आज पललाई भेट्न नायिका पूजा शर्मा तनहुँ पुगेकी थिईन् । हिजोमात्रै निर्देशक सुदर्शन थापा र उनकी पत्नी सुप्रिया कटुवालले पललाई भेटेका थिए ।
पल शाह प्रकरणमा धमाधम खुल्दै सेलिब्रेटी, कसले के भने ?
यतिबेला नेपाली कला क्षेत्र अभिनेता पल शाह प्रकरणले तरंगित छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाहविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको आरोपमा उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीले पललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली सेलेब्रिटीहरु खुल्न थालेका छन् ।
सुरुको समय यस बिषयमा अधिकांश कलाकर्मी मौन थिए । तर पछिल्लो दिनमा भने सेलेब्रिटीहरु एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका हुन् । उनीहरुले यस बिषयमा गम्भीर हुन,नारीको सम्मान गर्न र बालबालिकाहरुका अधिकारको रक्षा गर्नसमेत आह्वान छन् । पल शाह प्रकरणमा सेलिब्रिटीले सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेको धारणा उनीहरुकै शब्दमा –
लाग्छ,म पनि सधै उस्तै त्रासमा बाँच्ने दुईवटा छोरीहरुकी आमा हुँदैछु । कसरी जोगाउने यी नानीहरूलाई ?कस्तो शिक्षा दिए उनीहरुले आफूलाई बचाउन सक्नेछन् ?कुन क्षेत्रमा कर्म गर्न पठाए आफूलाई जतन राख्न सक्लान् ?वा कुन कुनामा सीमित राख्न सके त्यो ललाइ फकाई गर्ने छोरो मान्छेको नजरमा नपर्लान् ?
२० वर्षमुनिका छोरीहरू बालिका हुन् । बालिका कानुनतः सबै प्रकारका सुरक्षा र अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । समाजको भूमिका उनिहरुलाई संरक्षण गर्ने हो । कोसँग लभ छ ?कतिपटक यौन संपर्क भयो ?यस्ता नैतिकतावदी कुराको कानुनलाई मतलब हुनुहुँदैन ।
समाजको आडम्बर त कुरा गरिसाध्य छैन । केटी मान्छे भनेपछि दुनियाँभरी कतै नभएका नैतिक मापदण्ड र हिलो छ्याप्ने चलन लज्जाजनक रुपमा नेपालमा व्याप्त छ ।
मुलुकी अपराध संहिताले भन्छ, ‘१८ वर्ष मुनिकासँग यौन सम्बन्ध राख्नु बलात्कार हो ।’ कानुनमा कसले,के,कुन अवस्थामा उल्लेख नगरेको कारण नाबालिगको संरक्षणको जिम्मा राज्यको हो ।
राज्य भनेको हामी पनि त हौ नि,हैन र ?। १८ वर्षमुनिकाको सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएपनि बलात्कार ठहरिनुको कानुनी व्यवस्था हुनुको अर्थ निर्णय क्षमतासँग जोडिन्छ नै । अनि नाबालिगको संरक्षणको जिम्मेवारी समाजको पनि भएकाले नै यस्ता कानुनी प्रवन्ध गरिएको हो ।
यति बुझौँ नाबालिगकै करमा पनि कसैले यौन सम्बन्ध राख्यो भने त्यो बलात्कार हो । उसैले बोलाएको भनेर कानुनले छुट दिन्न ! मलाई विश्वास छ,नाबालिगको विश्वासको हत्या गर्नेको पक्षमा लागेर एक नाबालिगको चरित्र हत्या गर्न सक्दैन मेरो समाजले । नाबालिगको संरक्षण,कानुनको सम्मान हो ।
पछिल्लो प्रकरणसँग जोडेर धेरै आपत्तिजनक भिडियोहरू टिकटकमा भाइरल भइरहेका छन् । यस्तो कार्यमा धेरै बालबालिकाको पनि प्रयोग भइरहेको पाएको छु । जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक कुरा हो ।
कानूनले निरुपण गर्न बाँकी रहेको विषयमा कसैको व्यक्तिगत इज्जत–प्रतिष्ठामा आँच आउने र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका पोस्टहरु कृपया बन्द गरौं ।
खासगरी बालबालिकालाई यस्ता चिजबाट टाढा राखौं । यसमा नेपाल प्रहरीको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । दोषी र निर्दोष छुट्याउने काम कानून र अदालतको हो । त्यतिञ्जेल सबैले धैर्य गर्नुको विकल्प छैन । सामाजिक सञ्जालको अनावश्यक होहल्ला र गालीगलौजले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भन्नेमा सबै सचेत रहनुपर्छ ।
हामी यति त बुझ्न सक्छौँ नि–कानुन विपरित क्रियाकलाप गर्दा कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ । मलाइ मनपर्ने मान्छे हो,होइन । मेरो नजिक छ-छैनले यसलाई फरक पर्दैन र पर्नु पनि हुँदैन । प्रवृत्तिमाथिको आवाजलाई व्यक्तिगत बनाउनु आफैमा मुर्खता हो ।
एउटा वयस्कले नाबालिगमाथि यौनसम्बन्ध स्थापित गर्नु कानुन विपरित हो । यस्ता कानुन वयस्कहरुलाई यस्ता नाबालिगको खोजी गर्नबाट रोक्नमा मद्दत गर्नका लागि बनाइएका हुन् जुन सजिलै प्रभावित हुनसक्छन् वा आफैंले कुनै निर्णय लिन असमर्थ हुनसक्छन् वा जसले महसुस गर्छन् कि उनीहरुसँग यो मामिलामा कुनै विकल्प नै छैन ।
मलाई अझै पनि विश्वास छैन कि मानिसहरुले एक नाबालिगको साटो ३० वर्ष नाघिसकेका व्यक्तिलाई समर्थन गरिरहेका छन् । त्यो सम्बन्धले युवतीमा कस्तो मानसिक प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा तपार्ईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ?हो,उनी जताततै अन्तरवार्तामा पनि आएकी छिन् तर यी सबै के हुन् भन्ने कुरा बुझ्न उनी परिपक्व छैनन् ।
यो मुद्दामा म चेतनाको असाध्यै ठूलो कमी देख्छु । नाबालिगसँगको यौन सम्बन्धबारे किन कानुन बनाइएका छन् भनेर गुगलमा खोजी गर्नुहोस् । यदि कसैले पीडकलाई समर्थन गरिरहेको देख्नुहुन्छ भने उनीहरुलाई मेसेज गर्नुहोस्,कमेन्ट गर्नुहोस् । तपाईंहरुले जे सक्नुहुन्छ,त्यो गर्नुहुन्छ । तपाईंहरुले यो किन गलत हो भनेर बुझाउन सक्नुहुन्छ ।
म ती नाबालिगका लागि प्रार्थना गर्छु । यस्तो घृणा सहन असाध्यै नै गाह्रो हुन्छ । आत्मबल बलियो राख्नु । हामी तिम्रो साथमा छौँ,बहिनी । नाबालिगसँग यौनसम्बन्ध स्थापित गर्नु अपराध हो । यसमा कुनै यदि र तर लागु हुँदैनन् । पीडितलाई आरोप लगाउने गल्ती नगर्नुहोस् ।
‘उसले यसो गर्न चाहेकी थिइन्’,भन्नुहुन्छ भने तपाईं पीडकलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ । यदि नाबालिगले नै यसो गर्न चाहेकी छिन् भने ‘हुन्न’ भन्ने काम वयस्कको हो । किनभने यहाँ पीडित केही निर्णय गर्नका लागि असाध्यै सानी छिन् । जबकी ती शाह उनीभन्दा धेरै नै उमेरका थिए । यसले उमेर,शक्ति र नियन्त्रणमा ‘इल्लिगल डाइनामिक्स’ बन्ने गर्छ ।
आजकाल धेरै नाबालिगले आफूभन्दा निकै पाको उमेरका पार्टनरसँग यौनसम्बन्ध स्थापित गरिरहेका छन् जसले उनीहरुको जीवनभरी नै गहिरो घाउ बनाइदिएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता कानुन बनाइएको हो । यसले नाबालिग (केटा–केटी) को फाइदा उठाउन खोज्नेहरूलाई खबरदारी गर्छ । यो मुद्दा धेरैका लागि जागरुकताको माध्यम र धेरैका लागि पाठ बन्नुपर्दछ ।
पूजाको ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’
पल शाहको विषयमा अभिनेत्री पूजा शमाले भने दर्शकलाई ‘इमोसनल ब्ल्याक मेल’ गरिरहेकी छन् । उनी फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ चलाउन पलका फोटो अंकित टिसर्ट लगाएर रुँदै–कराउँदै हलमा पुग्नेदेखि पल विना आफू अधुरो रहेको भन्ने समेत गरिरहेकी छन् ।
‘पल निर्दोष छ’ भन्दै उनी न्यायाधीश समेत बन्ने गरेकी छन् । पलकोविरुद्ध उजुरी गर्ने नाबालिग गायिकालाई उनले उमेर हेरेर काम गर्नुपर्ने समेत बताउँदै आएकी छन् । उनले एक युट्युबरलाई दिएको अन्तर्वार्ता केटी मान्छे नाबालिग पनि हुन्छ । तर,आफ्नो उमेरमा कतिसम्म गर्नुपर्ने भनेर सोच्नुपर्छ भन्ने बताएकी छन् ।
उनले भनकी छन्, ‘उसले (नाबालिग) यो सोच्नु पर्थ्यो कि म सानै छु । पलले कपडा च्यातिदिने,जबर्जस्ती गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकि,पल त्यस्तो क्यारेक्टरको मान्छे होइन ।’
पलमाथि लागेको बलात्कारको आरोपपछि आफूले बलात्कारको परिभाषा नै नबुझेको समेत उनले बताउँदै आएकी छन् । कलाकारलाई कानुनले आम मानिस भन्दा सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने उनको धारणा रहँदै आएको छ । उनले दोषी प्रमाणित नहुँदै पललाई हतकडी लगाएको समेत चित्त नबुझेको धारणा समेत राख्दै आएकी छन् ।